ရွှေနိုင်ငံ: နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ ဟီလာရီကလင်တန်တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြောကြားချက်များ
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ ဟီလာရီကလင်တန်တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြောကြားချက်များ
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောကြားချက်များ
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍသစ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါကြောင်း၊
အခုဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေးဟာ သံအမတ်ကြီးအဆင့် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြေလျှော့ပေးတဲ့သတင်း ကြားသိရတဲ့အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံပြည်သူတွေ အထူးပဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြပါကြောင်း၊
ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေသေးဆဲ ဖြစ်သော်လည်း စံနမူနာပြဒီမို ကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေကြောင့် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းဖို့ တွန်းအားတစ်ရပ် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
သမ္မတအိုဘားမားကိုလည်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါကြောင်း။
မိမိတို့(၂)ဦး တတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှု ဖြစ်ပါကြောင်း၊
အဆွေတော်သမ္မတကြီးနှင့် အဆွေတော်တို့အစိုးရအနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို အလေးထား စောင့် ကြည့်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် တွန်းအားပေးနိုင်ဖို့ ခြေလှမ်းတိုင်းကို ခြေလှမ်းတိုင်းနဲ့ တုံ့ပြန်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံနှစ်ဘက်စလုံးရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ နှစ်နိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ပုံမှန်ဆောင်ရွက်သွားမယ့် နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မြန်မာပို့ကုန်တွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို တင်ပို့မှု ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးတာက စပြီး ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မြန်မာပြည်သူတွေအနေနနဲ့ သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ အမေရိကန်ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ရောင်းချစေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာမယ်လို့ မိမ်ိတို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေ ဆက်လက်လှမ်းနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်သူတွေ၊ ကွန်ဂရက်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
အဆွေတော် သမ္မတကြီးဟာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရက်တစ်အပြောင်းအလဲတွေဆီ လျှောက်လှမ်းခဲ့ပါပြီ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ဆောင်ကြဉ်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ တည်ငြိမ်မှု ရရှိစေဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါကြောင်း၊ ဤကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို မိမိတို့ အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း။
Remarks With Burmese President Thein Sein Before Their Meeting
PRESIDENT THEIN SEIN: (Via interpreter) (Inaudible) ambassador to the United States (inaudible). I believe that our subsequent meetings have contributedalot to the strengthening health of our bilateral relations between Myanmar and the United States. And on behalf of the people of Myanmar, we would like to extend our gratitude to Madam Secretary, who has openedanew chapter in our bilateral relations. The improvement of our bilateral relations, we can see that for instance, we now we have the – our diplomatic relations have been at the ambassadorial level.
And the people of Myanmar are very pleased that – on the news of easing of economic sanctions by the United States and we are grateful for the action by the United States. The democratic reform path that we have (inaudible). We still need to continue our path on democratic reforms, but with the recognition and the support from the champion of democracy like the United States, it has been an encouragement for us to continue our chosen path. And I would like to take this opportunity to express my cordial greeting to the President Obama and my best wishes for election campaign. I would personally like to (inaudible) to President Obama.
SECRETARY CLINTON: Well, Mr. President, it’s wonderful to see you again, as you say, for our third meeting. I believe we have had productive discussions in Nay Pyi Taw and in Siem Reap, and I look forward to suchadiscussion here in New York. We have watched as you and your government have continued the steady process of reform, and we’ve been pleased to respond with specific steps that recognize the government’s efforts and encourage further reform.
And in recognition of the continued progress toward reform and in response to requests from both the government and the opposition, the United States is taking the next step in normalizing our commercial relationship. We will begin the process of easing restrictions on imports of Burmese goods into the United States. We hope this will provide more opportunities for your people to sell their goods into our market. As we do so, we will continue consulting with Congress and other relevant stakeholders about additional steps, while at the same time working with you and supporting those who are hoping that the reform will be permanent and progress will be continuing.
We recognize, Mr. President, that you are doing many things at once – political reform, moving towardademocratic change; economic reform, moving toward greater connection of your country with the global economy; working to end ethnic conflicts as you move toward peace and stability for your country.
So I look forward to our discussion today, Mr. President. Thank you.
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 11:43
မရမ်းချောင် အနာကြီးရောဂါသည် စခန်းရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှု တွေကို ဒေးလီးမေးလ် သတင်းစာ ဂုဏ်ပြု ရေးသား ဖော်ပြ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှည်ကူးမြို့နယ်မှာ တည်ရှိတဲ့ မရမ်းချောင် အနာကြီးရောဂါသည် စခန်းရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေ ကို ဒေးလီးမေးလ် သတင်းစာက ...
ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ် ကလေးလူကုန်ကူးမှု ပိုများလာ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရောက် မြန်မာ ကလေးငယ်များ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ မဲဆောက်မြို့အပါအ၀င် တာ့ခ်ခရိုင်တွင်း မှာ ကလေး ကူးသန်း...
၁၂နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တဦးကို အလိုမတူ အားဓမ္မပြုကျင့်
Tuesday, 25 September 2012 ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ရင်ဂမြို့နယ် ဒတ်မာ ရာဒေသ၌ ၁၂နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦး ကိုအလိုမတူဘဲ မုဒိမ်းပြုကျင့်ြ...
ခုနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ခေတ်စားလာတဲ့ အမိုက်စား နားကပ် အဆင်တန်ဆာများ
ဟိုးအရင်တုန်းက နားကို နားကပ်အမိုက်စားတွေ၊ နားကပ်ခပ်ကြီးကြီးတွေ၊ အမျှင်အတန်းပါတဲ့ ကျောက် တန်းတွေနဲ့ အလှဆင်တာမျိုးတွေ မြင်ဖူးမှာပါ။ အဲ့ဒီေ...
ကျနော် သတိထားမိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖောင်းကြီးကြီးများ
▼ September (890)
▼ Sep 27 (33)
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း ပထမဆုံး မြန်မာနိ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းေ...
Bill Clinton, Yingluck Shinawatra, Hinari Kettles,...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှု ...
(၆၇)ကြိမ် မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ၏ General D...
မြန်မာနိုင်ငံက ယမကာ လုလင်များအတွက် ၀မ်းမြောက်စရာ
ဒေါ်စုအား မိုင်ဂျာယန်သို့ လာရောက်ရန် ကချင်အဖွဲ့အစည်...
သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ABSDF (မြောက်...
အဆောင်နေ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများပြားလာမှုကြောင့် မန္တေ...
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်ေ...
ဧရာဝတီမြစ်ရေ အချိန်အခါမဲ့ ပြန်လည်မြင့်တက်လာခြင်ြးေ...
သမ္မတကြီး၏ ကုလ မိန့်ခွန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
သမ္မတကြီး၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းအချို့ ည၈ နာရီ သတ...
အတုအယောင် account များကို ရှင်းထုတ်သည့် ဆောင်ရွက်ခ...
အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် မြန်မာ အဆင့်တက်လာဟု အစီရင်ခံ...
Email က တစ်ဆင့် ဗေဒင်မေးမယ်
သမ္မတသက်တမ်းပြည့်လျှင် ကျောင်းဆရာပြန်လုပ်မည်ဟု အမေရ...
US Import Ban ဖယ်ရှားလိုက်လို့ ဘာတွေ အကျိုးဖြစ်ထွန...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းကို လုံးဝရပ်နား စေလိုကြေ...
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အမှတ်သတ်မှတ်ချက် ရန်ကုန်နည်းပညာတက...
အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့၏ Osprey လေယာဉ်အား ဂျပန်စစ်ဘက...
နယူးယော့မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဘဏ္ဍာလိုငွေ ကျပ် ၈၅ဘီလီယံ...
လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ ပြန်လည်စတင်မည့် ရက် ကြေညာ
တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေး...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ ဟီလာရီကလင်တန်တို့ရဲ့ တွေ့ဆု...
USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စာ...
အမေရိကရောက် မြန်မာများ ညီညွတ်ကြရန်နှင့် ပြန်လာချင်...
မြန်မာပြည်သူများ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြော...
မြန်မာ့ပို့ကုန် ပိတ်ပင်ထားမှု အမေရိကန် ဖြေလျှော့မည်...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘ...